Na dia Teo Aza ny Fampanantenan’ny Filoha Rouhani, Mbola Misy Hatrany ny Filma Voarara ao Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Aogositra 2015 13:18 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Català, Deutsch, 日本語, عربي, English
Ny Tale Ahmad Reza Darvish nitarika ny tantara ara-pivavahan'ny fikomiana Ashura. Na dia eo aza ny fankatoavan'ny maro ny etika ara-pivavahana ao Iran amin'ny hanaovana ny sarimihetsika, niantso ny handraràna izany kosa ny mpitari-pivavahana mpandala ny nentin-drazana. Sary avy amin'ny Art Director, nahazoan-dalana ho ampiasaina indray.
Ity no ampahany voalohany amin'ny lahatsoratra izay nivoaka voalohany tao amin'ny iranhumanrights.org ary navoaka eto noho ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Hetsika Iraisam-pirenena Hoan'ny Zon'Olombelona ao Iran.
Na dia teo aza ny fanambarana imbetsaka nataon'ny Filoha Hassan Rouhani momba ny tokony hanomezana fahalalahana bebe kokoa ny kolontsaina ao Iran, mbola mitohy hatrany ny fandraràna ny sarimihetsika ao amin'ny Repoblika Islamika nandritra ny roa taonan'ny fitantanany ny raharaham-panjakana.
Vao haingana, tamin'ny volana Jolay 2015, ny nampidirina filma farany tao anatin'ny sarimihetsika voaràra, raha nandràra ny “Rastakhiz” ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Fitarihana Islamika, izay eo ambany fahefan'ny Filoha Rouhani. Nanampy isa ireo filma 14 tsy nahazo nivoaka hojeren'ny daholobe ao Iran hatramin'ny taona 2007 izany.
Na dia tsy navela hivoaka nandritra ny fitondran'i Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) aza ny ankamaroan'ireo filma ireo, efa tokony ho azon'ny vahoaka jerena amin'izay rehefa nodimbiasin'i Rouhani izy tao anatin'izay roa taona izay.
Ny tena anton'ny fandraràna matetika dia ny filazana amin'ny sarimihetsika ny fisian'ireo fihetsiketseham-bahoaka milamina taorian'ny fifandirana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 2009 tao Iran, lohahevitra saropady tanteraka ao amin'ny Repoblika Islamika izay mbola raisin'ireo extremista fa “fikomiana”, ary koa ny fahitana ireo voaly hijab “ratsy” tafian'ireo vehivavy mpiantsehatra.
Tamin'ny 5 Jona, 2013, nandritra ny fampielezan-keviny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena, nampanantena i Rouhani fa “hanolotra ny fanaraha-maso ny sehatra ara-kolontsaina ho an'ny vahoaka” izy ary nanontany ny fomba ahafahan'ny olona mpanivana mitsara ny fandikan-dalàna ara-pivavahana amin'ny horonan-tsarimihetsika. Nampitombo ny fanantenana izany fanambarana izany fa hivoaka amin'ny trano fijerena sinema amin'izay ireo filma voaràra raha voafidy i Rouhani.
Nitohy ny fanambarana fanohanana ny fahalalahana ara-kolontsaina nandritra ny fitondran'i Rouhani. Tamin'ny fihaonana niaraka tamin'ny mpanakanto sy olo-malaza ara-kolontsaina tamin'ny 8 Janoary 2014, hoy izy: “Fahadisoana lehibe ny fametrahana ahiahy ara-pilaminana ateraky ny zava-kanto.” Hoy izy nanohy: “Raha tsy misy ny fahalalahana, tsy hisy ny famoronana ny tena kanto. Tsy afaka mamorona sy mamokatra zavakanto am-pilaminana isika. Mety hamono ny zavakanto ny fametrahana aroriaka ara-piarovana. “
Tamin'ny Jona 2015, nandritra ny valan-dresaka hoan'ny mpanao gazety tamin'ny tsingerintaona faharoan'ny nahavoafidy azy, tamin'ny valim-panontaniana napetraky ny mpanao gazety iray tamin'ny fanafoanana ireo fampisehoana tamin'ny herintaona, nilaza i Rouhani hoe: “Eo amin'ny sehatra ara-kolotsaina, mino isika fa tokony avela hoan'ny olon'ny kolontsaina ny resaka kolontsaina ary tokony halalahana ny rivotra iainany mba ho tafahoana amin'ny tadiavin'ny mpanjifa ny asa ara-kolontsainan'ny mpanatontosa. “
Na izany aza, mbola tsy voavaha ny fifandirana eo amin'ny Minisitry ny Kolontsaina sy ny Fitarihana Islamika eo anivon'ny fitondrana Rouhani sy ny mpamokatra sarimihetsika Iraniana, ary mbola voaràra ny horonantsary.
Naseho voalohany tao amin'ny Fetiben'ny Filma Iraisampirenena Fajr tao Tehran ny ankamaroan'reo filma nosivanina, ary efa nalefa tamin'ny trano fijerena sinema nandritra ny andro vitsivitsy talohan'ny nandraràna azy ny sasany. Noraràna tamin'ny andro namoahana azy voalohany kosa ny lasibatra farany, “Rastakhiz”, na dia efa noesorina aza ny 40 minitra tao anatiny mba hahazoana alalana avy amin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Fitarihana Islamika.
Andian-tantara mitohy ara-pivavahana tamin'ny taonjato faha-7 ny “Rastakhiz” izay milaza ny tantaran'ny fikomiana Ashura, raha niady tamin'ny fitondran'ny kalifa i Hossein, zafikelin'ny Mpaminany Mohammad sady Imam fahatelo amin'ny Miozolomana Shiita ary namoy ny ainy tao anatin'ny ady akaikin'i Karbala. Nolavin'ireo mpitondra fivavahana sasany ny fampisehoana ny dadatoan'i Imam Hossein, Abolfazl al-Abbas. Araka ny teolojia Shiita, voaràra ny fampisehoana ny tarehin'ny Imam sy ny fianakaviany.
Nahazo loka sy mari-pankasitrahana marobe ny Tale Ahmad Reza Darvish raha naseho voalohany tamin'ny Fetiben'ny Filma Iraisampirenena Fajr 2015 ny filma “Rastakhiz”. Saingy mahery vaika ny tsikera avy amin'ny sehatra ara-pivavahana ka voatery notapahana ny 40 minitra amin'ilay horonantsary mba hanomezana fahafaham-po ireo mpanao sivana ao amin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny Fitarihana Islamika sivana. Na dia izany aza, mbola tsy afa-po ny sasany tamin'ireo mpitondra fivavahana, ka noterena ny Minisitera tamin'ny farany mba hanaisotra ny fahazoan-dalana.
Nandritra ny roa taona farany, nandray anjara lehibe tamin'ny fanakanana ireo filma tsy hojeren'ny vahoaka ny fepetra tafahoatra noraisin'ireo mpikambana mpandala ny mahazatra ao amin'ny parlemanta sy ny haino aman-jery henjam-pihevitra ary ny vondrona ara-pivavahana konservativa hiringiriny.
Tamin'ny 20 Septambrar 2014, nanoratra taratasy ho an'ny Minisitry ny Kolontsaina sy ny Fitarihana Islamika ny Komitin'ny Raharaha Ara-kolontsaina ao amin'ny Parlemanta Iraniana, izay milaza fa laviny ny fahazoan-dalana fandefasana ireo horonan-tsarimihetsika valo izay hita fa manohana ny “fikomiam-bahoaka” manohitra ny fandresen'i Ahmadinejad tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nampiady hevitra be tamin'ny taona 2009.
“Ny azontsika antenaina amin'ny andrim-panjakana miandraikitra ny indostrian'ny sarimihetsika dia ny hananany fahefana hanatanterahany tsara ny fanapahan-keviny. Nanome fahazoan-dalana handefasana ny horonan-tsarimihetsika nataoko [“Khaneh Pedari” (Ny Tranon'ny ray)] ny Ministeran'ny Fitarihana saingy avy eo noterana hanaisotra izany roa andro monja taty aoriana, na dia efa nalefa nojerena tamin'ny trano kely iray fijerena sinema aza” hoy ny tale Kianoosh Ayari tamin'ny Hetsika Iraisampirenena Mpandala ny Zon'Olombelona ao Iran.